Ny kinova azo antoka an'ny Devuan 2.0 ASCII dia vonona | Avy amin'ny Linux
Andro vitsivitsy lasa izay Navoaka ny kinova miovaova Devuan, nahatratra ny kinova 2.0 ary mitondra ny anarana kaody "ASCII" Nomena anarana ho an'ny asteroid hita tamin'ny 1936 avy amin'i Marguerite Laugier tao amin'ny Nice Observatory.
rehetra ny kinova Devuan dia homena anarana aorinan'ireo planeta madinidinika, arakaraka ny abidia, ilay kinova tsy miovaova antsoina hoe Ceres (planeta kely voalohany). Ity famotsorana ity dia manohy ny ezaka vitan'ny tetikasa ary manome fanohanana ireo maritrano ARM marobe tafiditra ao anaty fitaovana samihafa.
1 Momba an'i Devuan
2 Kinova vaovao an'ny Devuan
3 Sintomy ny Devuan 2.0 ASCII
4 Ahoana ny fanavaozana ny Devuan 2.0 avy amin'ny Devuan 1.0?
Momba an'i Devuan
Para Ianareo izay mbola tsy mahalala an'i Devuan, azoko lazaina aminareo fa fizarana GNU / Linux azo avy amin'i Debian io.
Devuan snandrisika ny tsy fahafaham-po sy ny fikorontanana nateraky ny vondron'olona mpampiasa Debian tamin'ny fanapaha-kevitra hampiasa systemd ao Debian.
Eto no misy an'i Devuan ny tanjona voalohany amin'ny tetik'asa dia ny manome variant Debian tsy misy fahasarotana sy fiankinan-doha amin'ny systemd, rafitra init ary mpitantana serivisy novolavolain'i Red Hat tamin'ny voalohany ary namboarin'ny ankamaroan'ny distros hafa.
Ny tanjon'i Devuan dia ny hanaja ireo fitsipika tany am-boalohany an'ny Debian, pero koa dia mitazona ny fahatsorana sy minimalism amin'ireo singa fototra ao amin'ny rafitra, tsy toy ny safidy nataon'ny tetik'asa systemd. Ny tena maha samy hafa azy dia ny tsy fisian'ny systemd sy ireo singa misy azy io.
Kinova vaovao an'ny Devuan
Ao amin'ity kinova vaovao an'ny Devuan 2.0 dia aseho ao amin'ny biraony sy kinova Live-minimal izay azo alaina amin'ny maritrano i386 sy amd64.
ihany koa Izy io dia manana sarin'ny rafitra vonona hampiasa amin'ny sehatra hafa toy ny ARM sy SOC, Raspberry Pi, BeagleBone, OrangePi, BananaPi, OLinuXino, Cubieboard, Nokia, Motorola, ary Chromebook isan-karazany, ary koa ampiasaina amin'ny milina virtoaly.
Ny Devuan 2.0 ASCII Installer ISOs manolora tontolo tontolo birao isan-karazany ao anatin'izany ny Xfce, KDE, MATE, kanelina, LXQt, sy ny hafa aorian'ny fametrahana azy. Ny maody fametrahana ny manampahaizana izao dia manolotra safidy SysVinit na OpenRC ho rafitra init.
Devuan 2.0 dia manolotra eudev fa tsy udev (izay nampidirina ho systemd) ho an'ny fitantanana ny fitaovana, ary dera fa tsy logind (koa ampahany amin'ny systemd) amin'ny maha mpitantana fivoriana azy, fa azo ampiasaina ihany koa ny ConsoleKit.
Ny server X dia afaka manomboka izao nefa tsy mila mampiasa alalana superuser (faka), mamela anao hanomboka azy mivantana ho toy ny mpampiasa nametraka elogind sy libpam-elogind alohan'ny hanombohana ny startx.
Navoaka tamin'ity kinova vaovao ity ny serivisy fikarohana fonosana.
Sintomy ny Devuan 2.0 ASCII
Si te-hisintona an'ity fizarana Linux ity ianao dia tsy maintsy mandeha amin'ny tranokala ofisialiny ary amin'ny fizarana fampidinana azy dia azonao atao ny mahazo ny sarin'ny rafitra avy amin'ny iray amin'ireo fitaratra misy azy. Ny tsara indrindra dia ny mampiasa ilay akaiky anao indrindra, ny rohy izany.
Ahoana ny fanavaozana ny Devuan 2.0 avy amin'ny Devuan 1.0?
Si Raha manana Devuan kinova 1.0 napetraka ianao dia azonao atao ny manavao ilay kinova vaovao tsy miverina mametraka ny rafitra.
Ho an'ity tsy maintsy manokatra terminal ianao ary manatanteraka ireto baiko manaraka ireto. Voalohany dia hampianay ny tahiry Devuan 2.0 amin'ny loharanom-baovao.list, izay hita eo amin'ny làlana: /etc/apt/source.list
Manitsy azy io amin'ny mpampanonta tianay izahay ary manampy ireto trano fitahirizana ireto:
apt-mahazo fanavaozana devuan-keyring
Amin'ny farany dia tsy maintsy hamerenanao ny solosainao mba hanan-kery ny fanovana rehetra ary rehefa manomboka azy io ianao dia tokony hahita fa efa manana ny kinova Devuan napetraka ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ny kinova azo antoka an'ny Devuan 2.0 ASCII dia vonona
rodolfo ortiz dia hoy izy:
Ny olana momba ny fametrahana farafahakeliny farafahakeliny dia tokony horesahina. Firy hardware?
Mamaly an'i rodolfo ortiz